Eldoret: Leeleel iyo Lugooyo
'Have they been developing or destroying it?' "Museveni"
Madaxweynaha Yugandha oo ka hadlaya furitaankii Shirka Eldoret ayaa marti sharaftii Soomaaliyeed ee iskugu timi hoolka shirka su'aasha kor ku xusan waydiiyey. Mr. Museveni isagoo ka hadlaaya qiimaha dadku leeyihiin waxa uu yidhi:
"The people are the most important human resource of a country". ...dadku waa hantida ugu muhiimsan ee umadi leedahay. Isagoo sii wata hadalkiisa ayuu Mr. Museveni gudagalay su'aal dareen xambaarsan markaasi ayuu su'aalay dadkii madasha fadhiyey:
"Now what have our Somali brothers and Sisters been doing to the Somali human Resource in the last eleven years? Have they been developing it or destroying it?". Imika maxay walaalaheena Soomaaliyeed [isagoo u jeeda dadka madasha shirka fadhiya] u qabanayeen 11 kii sano ee ina soo dhaafay dadkooda. Toloow miyaad baabiinayseen mise waad dhisayseen?
Waa su'aal da'weynoo madaxa daalinaysee....
Hayeeshee jawaabtii dadka madasha fadhiyey maxay ahayd?.
DESTROYING IT..... waa jawaab aan laga fiirsan.
Mr. Museveni wuxu hadalkiisa ku xidhay... thank you very much.... thank you...
Anigu hadaba waxan aad ula yaabay laba arrimood oo runtii si weyn ii cajab geliyey. Waa ta koobaade, jawaabta meeshaa dadkii madasha fadhiyey su'aashii Museveni ka bixiyeen. Waa ta labaade, xitaa Museveni oon anigu aaminsanahay in uu ka mid yahay dadka aduunyada ugu maskaxda xun ayaa maanta Soomaali sidan u liiday oo si xun uga yaayaqsooday.
Hadaba su'aasha aan isweydiinaya waxa weeye, maxaa sharaf iyo karaamo ah oo u hadhay kooxaha iskugu tagay Eldoret?
Xubnaha haatan jooga Eldoret ee ay ka midka yihiin:
- Muuse Suudi Yalaxow
- Xasan Abshir
- Xuseen Caydiid
- Aadan Gabyow
- Cabdillahi Yussuf
- Cabdalle Deerow
- Cusmaan Jaamac
iyo kuwa kale ee ku soo biiraya ee ay ka midka yihiin
- Cusmaan Caato
- Cabdiqaasim Salaad
waxa ay ku sifoobeen wax kasta oo xun. Haday noqoto dhagar iyo dhiig-islaan, haday noqoto hunguri, haday noqoto khaa'imul wadan iyo haday noqoto xaaraan wax ku abtirsada.
Weligeed hal xaaraan ihi, nirig xalaal ah ma dhasho. Nimanka sifooyinkaa leh miyey noqon karaan kuwo dawlad iyo dal islaameed dhisi kara. Waa MAYA....
Su'aasha Museveni iyo jawaabta ay kuwa madasha ka soo xaadiray bixiyeen waxay ka markhaati kacayaan in aanay kuwa halkan iskugu yimi ahayn kuwii saxda ahaa ee dal iyo dad-tabyo lahaan karayey. Maxaa hadaba la iska daalinayaa oo la iskugu yeedhay shimbirahan bahaloobey een bin'aadamnimo wax la yidhaahdo aan aqoon?....
Aduunyadu Soomaaliya in badan ayey la soo kacaa-kufaysay, dawo aan lagu dayina ma jirto haba yaraatee ..... kol ay ku tahay ciidamo caalami ah oo loo keeno, kol ay ku tahay nidaam xaaraan ah oo dusha lagaga keeno, kol ay ku tahay shirar tacab laga mutay oo Soomaaliya dadka isku haya loogu yeedhay.
Eldoret iyo 14kii shir ee ka horeeyeyba waxaa la odhan karaa waxbaa qaldanaa. Waxaa weligeedba qaldanaa maantana waa qaldan yihiin. Shirkan Eldoret waxaan shaki ku jirin in uu sii fogayn doono xalka dhabta ah ee Soomaaliya ay maanta u baahan tahay. Kolaba in uu xal soo dedejiyo ha eegin. Ninka xal shirkan ka filayaana, waa nin war-la'. Had iyo goor shirarka waxaa ka soo xaadirayey dagaal iyo hunguri oogayaal. Maye dadkii hogaanka hanan karayey?
Tan iyo 1988-kii dhulkii Somaliya la odhan jiray wax isku hayey may jirin. Xaqiiqduna waxa weeye dawladii Maxamed Siyaad Barre waxay uun soo dedejisay oo ay afjartay nidaam aanay Soomaali ku heshiin in ay ku wada noolaato. Umad kastaaba waxay u noolaataa siday iyadu rabto. Soomaalidu sideebay u noolaanayaan?. Waa su'aal u taal in la waydiiyo cida ay khusayso.
Maalintii 3aad ee shirka Eldoret waxa madasha shirka laga soo wariyey in nin lagu magacaabo Xuseen Saalax oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland, haatana ku jira xubnaha kooxda Carta ee madasha shirka jooga uu ku andacooday in madaxda Somaliland jeerooy yimaadaan goobta shirka mooyaane aanu shirku tamarinayn. Mr. Saalax isaga oo doodiisa sii wata waxa uu yidhi "mar hadii ay Somaliland meeshatan ka maqan tahay maxaa Soomaali u yaala halkan oo laga wada hadlayaa?". Waa hadal aan ku aroorin karo maahmaahda caanka ah ee Soomaaliyeed ee tidhaahda: "Afnoolina wuu hadlaa, Eyna wuu ciyaa". Mr. Elija (madaxa guddida qabanqaabada shirka) ayaa u jawaabay Xuseen Saalax wuxuuna ku yidhi hadal ilmo yar oo 2 jir ah u qalma kaasoo ahaa: "waan casuunay madaxda Somaliland, waxaanan ku kalsoonahay in ay inagu soo biiri doonaan". Xuseen Saalax isagoo ku qanacsan jawaabta Elija ayuu ku jawaabay: "Ockey... that is fine, thank you...".
Madaxweyne Daahir Rayaale kaahin oo ah ninka uu Xuseen Saalax tebayo ee uu madasha ugu yeedhayo waa mudane sharci iyo dastuur lagu soo doortay. Waa hogaamiye umad iyo ciid uu ka taliyo haysta. Waa nin aan balwad dhiig lahayn, waana shaqsi dadkii soo doortay ku iimaan qaba. Xaqiiqdu sida ay tahayna Daahir Rayaale umadiisa uu ka soo jeedo wuu matalaa, waana loo ogyahay. Umada iyo Dalka Daahir Rayaale u taliyo waxbaa u dhisan, dawladnimo iyo calan bay hadsanayaan. Xuseen Saalax dhankiisa wuxu dhalasho ahaan ka soo jeedaa Somaliland hayeeshee waa shaqsi sidayda oo kale in ku dhow 20 sano aan caradii uu u dhashay war iyo wacaal u hayn. Ka soo qaad anoo imika is caleema saara oo sheegta in aan matalo gobolkayga Sanaag oon dhalasho ahaan ka soo jeedo. Maxay iigu taalaa, yaanse matalaa. Mida kale Eldoret bahalo meel ay galaan la' oon aduunyada wax karaamo ah ku lahaynbaa iskugu yimi. Hadaba maxaa Eldoret yaala oo Xuseen Saalax ugu yeedhayaa madaxweyne Rayaale. Maxaan hashayda banaanka u keenayaa.....?
Dadka madasha shirka Eldoret iskugu yimi waa dad sida Xuseen Saalax aan cidna matalin, kalsooni lagu qabaayina aanay habayaraatee jirin. Tusaale farabadan ayaa inoogu sugan Eldoret. Xaqiiqduse waxa weeye, jeeroo ninkii talada lahaa yimaado mooyaane Soomaaliya heli mayso degenaansho iyo xasilooni - dawlad hadalkeeda daa.
Gebogebo waxan qabaa oon ka cabsanayaa in xanuunka shicibka Soomaaliya haystaa uu sii siyaado Eldoret dabadii. Waxan u soo wada joognay diifta ay Carti kaga tagtay Soomaaliya. Carta ka hor dadka reer Soomaaliya waxay ka soo raysanayeen hagardaamooyinkii faraha badnaa, markii Carti timi waxa dhacay dagaalo aad u tiro badan, kumanaan maati ahna dagaaladaasi way saameeyeen. Aduunyada waxan leeyahay, Soomaali u dhaafa Soomaali.